Fetin’ny Pentekosta : olona 28 voasambotry ny polisy | NewsMada
Fetin’ny Pentekosta : olona 28 voasambotry ny polisy
Nahatratra 28 ny isan’ny olona voasambotry ny polisy teo am-panaovana ny asa ratsiny, nandritra ny fetin’ny Pentekota teo. “Noho ny paikady napetraky ny eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, afaka niaina tao anatin’ny filaminana tanteraka ny vahoakan’Antananarivo Renivohitra”, hoy ny polisy. Nanao fisafoana sy nipetraka teny amin’ny faritra noheverina fa mafana ary koa teny amin’ny fidirana sy fivoahana ny renivohitra, tsy hadino ihany koa “ny dispositive anti-pillage”-n’ny polisy.
“ Na teo aza ny fitohanana teo amin’ny fidirana sy ny fivoahana ny Renivohitra, tsy nikely soroka nanao ny andraikiny handaminana izany ny eo anivon’ny polisim-pirenena”, hoy ny fanazavana. Nandraisan’ny polisy fitanana an-tsoratra ny lozam-pifamoivoizana miisa 18. Tao anatin’ireo 18 ireo, olona 19 ireo naratra ka efatra mpandeha tongotra , sivy mpandeha moto ary telo tamin’ireo, naratra vokatry ny fitondrana fiara tao anatin’ny hamamoana. Ny ambiny kosa, ireo naratra tao anaty fiara noho ny loza nahazo azy ireo.
Nisy ihany koa ny fahitana faty roa izay tao an-trano ny iray, ary ny iray maty an-drano.
“Tontosa tamin’ny antsakany sy andavany ny adidy napetraka amin’ny polisim-pirenena satria nihena ireo fandikan-dalana isan-karazany ary nitombo ireo olona voasambotra tratra teo am-panatanterahana ny asany”, hoy ny polisy.